Vlocity: Digitally Shandura Salesforce neTransactional Kugona | Martech Zone
Vlocity ipuratifomu inokwenenzvera makore ekushandisa kubva ku data kufambisa kuenda kuseri-hofisi Kubatanidza, omnichannel kutengesa uye sevhisi kune mobile uye analytics. Vlocity inobatsira kuburitsa yakakwira-mhando, maindasitiri-akasarudzika zviitiko mune anotevera maindasitiri:
Media uye Varaidzo
Mune iwo maindasitiri, kunangana kwakananga nevatengi inogona kuva pfupi - uye iri pakati nepakati. Asi ruzivo rwavo mune izvo zvinosangana zvenguva pfupi zvinotarisa kana vakava vanosimudzira, kana mudzvinyiriri. Iko kudyidzana kunofanirwa kuve kuzere, kwakaringana, nekukurumidza - uye kupedziswa mune chiteshi chevatengi kusarudza. Kunyanya kukosha, vashandi vako vanofanirwa kubatana nevatengi pane a nhanho yemunhu - kurega tsika dzako dzemhando dzichipenya.
ne Vlocity's Dhijitari Ekudyidzana Platform, vashandisi vanogona kutarisa kumutengi, pane iyo software. Kubudikidza nesimba rakasimba rezvinhu-zvakavakirwa zvikamu - zvese zana muzana muzana paSalesforce - Vlocity inoshandura yako CRM system nekudzika indasitiri-yakatarwa transactionional kugona. Uine nyore kushandisa inoyerera kuyerera, iwe unozogona kubatanidza kunyorera, kumhanyisa vashandisi vatsva mukugadzira, uye kudzikisira yako yakazara mutengo wekushandira.
Vlocity's Dhijitari Ekudyidzana Platform
Vlocity Chinyorwa ™ - Craft inosimba kudyidzana kwevatengi pasina kodhi, uye kuendesa kune akawanda chiteshi uye zvishandiso. Tungamira vashandisi kuburikidza nekutengesa uye sevhisi maitiro nekukurumidza, kwakasarudzika mhinduro, uye musono kusunganidzwa kune zvebhizimusi kunyorera uye data. NeVlocity OmniScript ™, wakasununguka kugadzira kudyidzana kwevatengi - uye zvinoshandura kushandurana uko kushanduka kwemusika. Hapasisina kodhi inodhura yekuchengetedza - ingori nhanho nyowani yekukurumidza bhizinesi.
Vlocity Maindasitiri Console - Kana mutengi wako achifona, tora matanho kubva kuVlocity Viwanda Console - nekwaniso yekutanga mizhinji yekutungamirwa kuyerera kubva kune imwechete peji. Iine hunyanzvi, kadhi-yakavakirwa UI, kuona mikana yekukura, hukama hwechigadzirwa uye nhoroondo yekudyidzana haina kumbobvira yave nyore - kunyangwe kana iyo data ichengetwa kunze kweSalesforce. Uyezve, ine zviyero-zvinoenderana HTML5 uye CSS3 matemplate, iwe unogona kuisa uye kuendesa zvakafanana basa kune akawanda chiteshi nemidziyo.
Vlocity DataRaptor ™ - Manage yakaoma data zvivakwa natively pane iyo Salesforce chikuva ine inozivisa data mepu uye REST maficha. Vlocity DataRaptor ™ inorerutsa kusanganisa kwedata rekunze - kurodha zvirinyore, kubvisa uye kushandura zvimiro zvemhando yepamusoro mumafomati akajairwa eJSON - zvese pasina kukodha. Kubatanidzwa ikozvino kwave kukurumidza kuita, uye kuri nyore kuchengeta.
Vlocity Maitiro Engines - Parizvino zvinopihwa zvakaenzanirana, sefa uye kurudzira kuverenga mitengo uye mubhadharo, kurudzira zvigadzirwa - zvese zvinoenderana nemitemo inogadziriswa zviri nyore Vlocity's yekuwedzera suite yekuzivisa mabasa ebhizinesi inowedzera yakadzika indasitiri mashandiro kune ako mutengi kudyidzana - kudzikisa kukodha, kurerutsa kuchengetedza uye kuwedzera agility.
Vlocity Mobile - Enterprise maapplication anowanzo tarisa ekupinza ruzivo pafomu, kufamba uye kuendesa mamwe mafomu. Vlocity Mobile maapplication akasiyana, ari nyore uye ari nyore kushandisa. Inoratidzira kuverenga kwenguva yekudyidzana uye nyaya dzakaitika nemutengi. Mushandisi anogona kukurumidza kutarisa kuburikidza neiyo nguva yemutengi uye kuwana zano rezvichangoitika pamberi pemusangano unotevera wevatengi. Enhanced tagging yekukurumidza kuwedzera ruzivo rwekufona uye kufona kuzivisa kune vatengi.
Vlocity Wear - Zvipfeko zvinovhura musuwo wenguva dzakatowanda murwendo rweomnichannel - nguva dzakasarudzika, dzakareruka, uye dziri nyore. Kubva pane zvakakwidziridzwa kushambadzira kune ane mamiriro-ekuziva mikana yekutengesa, Vlocity Wear inobatsira iwe kugadzira uye kuburitsa inoshandura mitsva yekubata mapoints kune ako vatengi. Seamlessly batanidza kune yevatengi data chero nguva, chero paine Vlocity Wear. Budirira nekukurumidza, kwakachengeteka kutengesa resolution nekuwana mhenyu data, kuongorora zvirongwa, uye kugovana ruzivo nevatengi zvakananga kubva kumidziyo inopfeka. Dhiraivha kugona pane rako bhizinesi uye nekuvandudza mashandiro ebhizinesi nehunyanzvi hwekubvumidza sarudzo, kutumira zviyeuchidzo, nezvimwe.
Vlocity Clickstream Analytics - Na Salesforce Analytics chikuva, Vlocity inosanganisa yakadzika analytic kugona needu ekutaurirana app kuendesa inoitika inoitika kune edu vatengi. Iye zvino mabhizinesi anogona kukwidziridza nguva yekukoshesa nehungwaru, indasitiri-yakatarisana nemashandisirwo egore anofambiswa neiyo Salesforce Wave Analytics chikuva. Haisi chete data hombe, ndiyo yakanyanya kunaka data.
Kumbira Vlocity Demo